Semalt Uchaza Indlela Yokukhipha Idatha Edingekayo Kusuka kumawebhusayithi e-HTML
Ulwazi oluningi olunikezwa enetheni lubhekwa "olungakhiwe" ayihlelekile kahle. Amawebhusayithi we-HTML ahlukile ngendlela aqukethe amadokhumende ahlelekile, futhi umbhalo owethulwe kumadokhumenti uhlelwe ngaphakathi kwekhodi ye-HTML engaphansi.
Kukhona izindlela ezintathu eziyinhloko zokukhipha idatha kusuka kumawebhusayithi e-HTML:
Ukugcina umbhalo oqukethwe ekhasini lewebhu kukhompyutha yakho;
Ukubhala ikhodi yedatha yedatha;
Ukusebenzisa amathuluzi okwenza okukhethekile;
1. Indlela yokukhipha i-HTML kuwebhusayithi ngaphandle kokufaka ikhodi
Ungakwazi ukukhipha ikhasi lewebhu ngokusebenzisa izinyathelo ezichazwe ngezansi:
Ukukhipha Ngemuva kokuvula ikhasi lewebhu eliqukethe umbhalo oyifunayo, chofoza ngakwesokudla bese ukhetha inketho ethi "Londoloza Ikhasi", noma "Londoloza".Thayipha igama lefayela kule nsimu "Igama lefayela" futhi kusukela kwimenyu yokudonsela phansi ethi "Gcina njengohlobo", khetha "Ikhasi leWebhu, i-HTML kuphela - camara fotografica reflex compacta. "Chofoza inkinobho ethi" Gcina "bese ulinda imizuzwana embalwa.
Wonke umbhalo oleso khasi uyakhishwa futhi ulondolozwe njengefayela le-HTML. Izinketho zangempela-ukufometha kwekhasi zihlala zingaguquki, futhi ungahlela okuqukethwe kulabahleli bombhalo njenge-Notepad.
Ukukhipha ikhasi eliphelele lewebhu
Khetha "Londoloza njenge" noma "Londoloza Ikhasi" njengenketho kwimenyu "yefayela". Bese uchofoza "Ikhasi leWebhu, Qedela" kusukela kwimenyu yokudonsela phansi ethi "Gcina njengohlobo". Emva kokuchofoza okuthi "Londoloza," umbhalo kanye nezithombe zizokhishwa ekhasini futhi zilondolozwe noma ngabe ufuna. Umbhalo ufakwa kwifayela le-HTML ngenkathi izithombe zigcinwa kufolda.
2. Ukukhipha i-HTML kusuka kuwebhusayithi usebenzisa ikhodididi
Ungasebenza ngokuqondile namafayela we-HTML usebenzisa amathuluzi akhethekile. Futhi, ungakha ikhodi ukususa wonke amathegi we-HTML futhi ugcine umbhalo oqukethwe kumafayela we-HTML usebenzisa i-XPath noma inkulumo ejwayelekile. Ezinye zezilimi ezithandwayo kakhulu zokuhlela kulo msebenzi zihlanganisa i-Python, iJava, i-JS, i-Go, i-PHP ne-NodeJs.
3. Ukusebenzisa amathuluzi okukhipha idatha yedatha
Uma ufuna nje ukukhipha amafayela e-HTML kusuka kuwebhusayithi ngaphandle kokubhala umugqa owodwa wekhodi noma ugweme ukuhlushwa kwekhophi nokunamathisela indlela, sebenzisa amathuluzi we-web scraping . Eqinisweni, kunezinto eziningi eziwusizo ezingakwazi ukuvuna ulwazi oludingekile kusuka kuwebhusayithi bese luguqula zibe ifomethi ehlelekile. Vele uzame ithuluzi elincane lokuhlunga , futhi ngokuqinisekile uzothola okufanele kakhulu izidingo zakho zokuqhafaza.